ရေဘေးသင့် အိမ်ထောင်စု(၁၁၄၃)စုကို ဆန်နဲ့ အစားအသောက်တွေကို လှူဒါန်းမယ့် ခိုင်နှင်းဝေ - Sweet Myanmar
ဒေါ်လန်းကျေးရွာအုပ်စု အိမ်ခြေ စုစုပေါင်း -၁၁၄၃ စု. အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင် ဆန် ၅ပြည် (တစ်ပြည် ၁၀၀၀ထောင် နှုန်း×၅ = ၅၀၀၀ကျပ် ) ဆီ၁လီတာ ၂ဗူး ( ၁ဗူး၈၀၀ကျပ်×၂ = ၁၆၀၀ကျပ်) ငါးသေတ္တာ ၁၀ဗူး ( တစ်ဗူး၃၅၀ကျပ်×၁၀ = ၃၅၀၀ကျပ်)
ရေသန့်၁လီတာ ၁ကဒ် ( ၈၅၀ကျပ်) မုန့်ခြောက် ၂ထုပ် (တစ်ထုပ် ၇၀၀ ကျပ်×၂ = ၁၄၀၀ကျပ်) အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်စုစုပေါင်း = ၁၂,၃၅၀ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ရေဘေးသင့်ကာကယံရှင်ပြည်သူများထံသို့ တိုက်ရိုက်လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။”
“ကျမရဲ့ fb messenger နှင့် အသင်းဖုန်းများသို့ ပါဝင်လှူဒါန်းချင်တယ်ဆိုပြီးဆက်သွယ်ထားသော အလှူရှင်များအားလုံးလည်း အခုဖော်ပြထားသည့်နှုန်းထားအတိုင်း မိမိလှူဒါန်းလိုသော အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်အတိုင်းလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအားလုံး အခက်အခဲများမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေရှင်.ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်း” ဆိုပြီး ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေထားပါတယ်။
ခရက်ဒစ် – momoလေး
ဒျေါလနျးကြေးရှာအုပျစု အိမျခွေ စုစုပေါငျး -၁၁၄၃ စု. အိမျထောငျစုတဈစုလြှငျ ဆနျ ၅ပွညျ (တဈပွညျ ၁၀၀၀ထောငျ နှုနျး×၅ = ၅၀၀၀ကပျြ ) ဆီ၁လီတာ ၂ဗူး ( ၁ဗူး၈၀၀ကပျြ×၂ = ၁၆၀၀ကပျြ) ငါးသတ်ေတာ ၁၀ဗူး ( တဈဗူး၃၅၀ကပျြ×၁၀ = ၃၅၀၀ကပျြ)
ရသေနျ့၁လီတာ ၁ကဒျ ( ၈၅၀ကပျြ) မုနျ့ခွောကျ ၂ထုပျ (တဈထုပျ ၇၀၀ ကပျြ×၂ = ၁၄၀၀ကပျြ) အိမျထောငျစုတဈစုလြှငျစုစုပေါငျး = ၁၂,၃၅၀ ကပျြနှုနျးဖွငျ့ ရဘေေးသငျ့ကာကယံရှငျပွညျသူမြားထံသို့ တိုကျရိုကျလှူဒါနျးသှားမှာဖွဈပါတယျ။”
“ကမြရဲ့ fb messenger နှငျ့ အသငျးဖုနျးမြားသို့ ပါဝငျလှူဒါနျးခငျြတယျဆိုပွီးဆကျသှယျထားသော အလှူရှငျမြားအားလုံးလညျး အခုဖျောပွထားသညျ့နှုနျးထားအတိုငျး မိမိလှူဒါနျးလိုသော အိမျထောငျစုအရအေတှကျအတိုငျးလှူဒါနျးနိုငျပါတယျ။ ရဘေေးသငျ့ပွညျသူမြားအားလုံး အခကျအခဲမြားမှအမွနျဆုံးကငျးဝေးနိုငျကွပါစရှေငျ.ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတအသငျး” ဆိုပွီး ခိုငျနှငျးဝကေ သူမရဲ့ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ မြှဝထေားပါတယျ။
ခရကျဒဈ – momoလေး